မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၅)
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၅)
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Sep 21, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 24 comments
ညရောက်တော့ စာကျက်နေသော ၀တီ့ကို ဆရာမက ခေါ်ပြောခဲ့သည်။
“၀တီ..ဒီနေ့ နှင်းဆီအမေက ဆရာမကို ပြောတယ်…သမီးက နှင်းဆီကို နောက်ခံကောင်းလို့ သာနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ပြောလိုက်လို့တဲ့…”
“ဟုတ်တယ် ဆရာမ…သမီးလည်း ငြိမ်မနေနိုင်လို့ ဒီနေ့ ထပ်ပြောလိုက်တယ်… ဆရာမက ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲ…”
“ဆရာမကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး..ကလေးတွေပဲ..အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်..”
ခဏလေးနှင့် ပြီးသွားမည်ဟု ထင်ထားသော ပြဿနာက တော်တော်နှင့်မပြီးခဲ့ပေ။ ဆရာမ၏ အေးဆေးမှုကြောင့် နှင်းဆီ၏အမေက မချင့်မရဲဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လာပြောနေသည့်အတွက် နောက်ဆုံးတွင် ဆရာမက ပြောလိုက်လေသည်။
“အန်တီ..တကယ်တော့ ကျွန်မ ဒီကိစ္စကို သိထားတာကြာပါပြီ…ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတည်းက ၀တီက ပြောပြထားပါတယ်..ကျွန်မကလည်း ကလေးချင်း ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စမို့လို့ ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေတာပါ…၀တီက နှင်းဆီကို အဲဒီလို ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင် ၀တီဘာလို့ အဲဒီလိုပြောလိုက်တာလည်းရော သိလား အန်တီ…တကယ်တော့ ၀တီ့ကို နှင်းဆီက နင်က ငါ့ရဲ့ငယ်နိုင်ပဲ… ငါတုိ့တစ်မိသားစုလုံး ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်..နင်ဘယ်တော့မှ ငါ့ကို မနိုင်စေရဘူး လို့ ပြောခဲ့တယ်… အဲဒါကြောင့် ၀တီက မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တာပါ..အန်တီတို့ အဲဒီကိစ္စ အစအဆုံးကို နှင်းဆီက ပြောပြထားလား မသိဘူး..”
“ဟင်..နှင်းဆီက အဲဒီလို ပြောခဲ့တာလား…သမီးရယ်… ဘာလို့ သူများကို သွားပြောတာလဲ…ဟုတ်ကဲ့.ဆရာမ..အန်တီ အခုမှ သိတာပါ…တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာမရယ်..၀တီတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲ..”
အမှန်တွင် နှင်းဆီမိဘများက ၀တီ့ဘက်က စကားကိုသာ သိထားကြလေသည်။ ၀တီ၏ စကားများသည် နှင်းဆီ၏ စကားများကြောင့် ဖြစ်လာသည်ကို တကယ်ပင် မသိရှိလေသည်လား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြသည်လား၊ သူတို့သာ အသိဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တကယ်မသိရှိသည်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတ္တကြီးသော နှင်းဆီ၏ မိဘများက နှင်းဆီအပြောခံရသည့်အပေါ်တွင်သာ ခံစားကြပြီး ပြဿနာအရင်းမြစ်ကို မေးမြန်းမည့်သူများ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်မှစ၍ ၀တီတို့နှစ်ယောက်၏ ဆက်ဆံရေးများ အေးစက်သွားသကဲ့သို့ ဆရာမအပေါ်တွင်လည်း နှင်းဆီတို့ဘက်က စိတ်ခုသွားကြလေသည်။ ဆရာမက ၀တီ့ဘက်တွင်သာ ရှိနေသည်ဟုလည်း သတ်မှတ်သွားကြသည်။
ရှစ်တန်းနှစ်ကတော့ ၀တီနှင့် နှင်းဆီကြားရှိ ပုန်းကွယ်ခဲ့သော အာဃာတအမုန်းများကို ထင်ရှားစေခဲ့သော နှစ်တစ်နှစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုထင်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သူကလည်း နှင်းဆီကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်လေသည်။ အရာရာအားလုံးတွင် အသာရချင်သော နှင်းဆီသည် ဆရာမသီတာ၏ အချစ်ကို ၀တီက ပိုရထားသည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည့်နောက်တွင်တော့ နှင်းဆီ၏ မနာလိုမှုများကို တွေ့ရလေတော့သည်။
ထိုနှစ်က မြို့နယ်အဆင့် ထူးချွန်စာမေးပွဲတွင် ၀တီက ပထမရခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ မမှန်သော်လည်း အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေသည့် စကားတစ်ခွန်းကို နှင်းဆီထံမှ ကြားရလေ၏။
“၀တီက ပထမရမှာပေါ့… ငါမှ ၀င်မပြိုင်တာကိုး… ”
၀တီပဲ ကံဆိုးသည်လားမသိ။ နှင်းဆီ၏ စော်ကားမှုများနှင့် ပူလောင်နေရသည့်ကြားမှ ၀တီ၏ အိမ်တွင်းရေး အဆင်မပြေမှုများက ၀တီ့ကို ပို၍ စိတ်ဖိစီးစေခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နှင်းဆီအမေက နေမကောင်း၍ နှင်းဆီကျောင်းမတက်လျှင် တစ်နေ့တာသင်ကြားသမျှကို ၀တီက ပြန်ပြောပြရ၏။ စိတ်မကြည်လင်မှုများနှင့် ၀တီတစ်ယောက် သင်ခန်းစာအကုန်လုံးကို မမှတ်မိ၍ မေ့ကျန်ခဲ့သည့်အခါ နှင်းဆီဘက်က အမည်တပ်သည်။
“နင်တော်တော် စိတ်ပုပ်တယ်နော်… သင်တာကို အကုန်မပြောဘူး… လျှိုတယ်ပေ့ါ ဟုတ်လား..”
ဖြေရှင်းချက်လည်း မပေးချင်တော့ပေ။ စာကြိုးစားသော ၀တီက သင်ခန်းစာကို မေ့သည်ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆဟန်တူပါသည်။ ခံစားချက်များကိုလည်း မပြောပြချင်တော့သောကြောင့် အမှန်တရားကိုသာ ပြောလိုက်တော့သည်။
“အချိန်စာရင်းကိုမကြည့်ဘဲ အလွတ်ပြောလိုက်တာဆိုတော့ မေ့ကျန်ခဲ့တာ… နင်မယုံလည်း မတတ်နိုင်ဘူး… ငါပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လည်း နင်သူများဆီက ပြန်သိရတာပဲ..လျှိုတယ်ထင်ရင် နောက်တစ်ခါ ငါ့ကို လာမမေးနဲ့တော့…”
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုအချိန်မှစ၍ ၀တီ ဆုံးဖြတ်ချခဲ့သည်။
“နောက်နှစ်ကျရင် သူ့အိမ်မှာလည်း ကျူရှင်မတက်ဘူး…သူနဲ့လည်း အတူတူမထိုင်တော့ဘူး…”
ကိုးတန်းနှစ်တွင် နှင်းဆီနှင့် အတူတူမထိုင်ဖြစ်တော့သော်လည်း သူ့အိမ်တွင် ကျူရှင်သွားတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် အပြင်ဆရာဝိုင်းကို တက်သော်လည်း ကိုးတန်းဆရာများထဲတွင် အိမ်နီးနားချင်းနှင့် အမျိုးတော်စပ်သူ ဆရာမများ ပါနေသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆရာမသီတာ၏ စကားကို နားထောင်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း စိတ်မပါသော်လည်း နှင်းဆီအိမ်တွင်ပင် ကျူရှင်တက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတူတူမတွဲတော့သည့်ကောင်းကျိုးမှာ ရန်ပွဲနည်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကြီးမားဆုံးဖြစ်လာမည့် ပြဿနာကတော့ ကျောင်းနှစ်ဝက်လောက်တွင် စတင်ခဲ့လေသည်။
“ကဲ..အားလုံးပဲ နားထောင်ကြ…ဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲရှိတယ်….အထက်တန်းဆင့်အနေနဲ့ ကိုးတန်းနဲ့ ဆယ်တန်းက ပြိုင်ရမယ်…ခေါင်းစဉ်က မြတ်ဆရာ…ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ကြိုက်ရေးပြီး စာမူတင်ရမှာ…အနည်းဆုံးတော့ ကိုးမျက်နှာလောက် ရေးပေးရမယ်…ပြိုင်မယ့်သူတွေ ဒီအပတ်သောကြာနေ့နောက်ဆုံး စာမူလာတင်ပေးရမယ်…”
ကိုးမျက်နှာ။ နည်းနည်းတော့ များသည်။ သို့ရာတွင် အတွေ့အကြုံအနေနှင့်တော့ ၀င်ပြိုင်ရမည်ပင်။ အဆင့် (၁) မှ (၁၀)အတွင်း သူငယ်ချင်းများကလည်း ပြိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုနေ့ကစ၍ ၀တီတို့အဖွဲ့ အလုပ်များလေတော့သည်။ နှင်းဆီကတော့ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်။ ၀င်ပြိုင်မည်မဟုတ်ဟု ထင်မိသည်။ ၀တီတို့ကတော့ စာသင်ချိန်များ၌ ခွင့်တိုင်၍ စာကြည့်တိုက်ထဲက စာအုပ်တွေကို မွှေနှောက်ရှာသည်။ အချက်အလက်တွေကို စု၊တု၊ပြုပြီး ရေးကြသည်။ မည်သို့ပင်ရေးရေး ကိုးမျက်နှာကတော့ မပြည့်ပင်။ အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်အနေနှင့် ၀တီတစ်ယောက် စာစီစာကုံးထဲတွင်ထည့်ရေးထားသည့် ကဗျာများကို တစ်ကြောင်းချင်းစီသာ ချရေးလိုက်တော့သည်။
လုံမရယ်… ကောင်းခန်းဆို ဖြတ်ပီ….. :bar:
အေးလေ ဖြတ်မယ်ဆိုလဲ ဖြတ်မယ်ပြောပေါ့….. အခုတော့ ကွန်ပျူတာ စခရင်ကြီး ကုန်းရုံးဖတ်နေတာ အရှိန်လဲရရော…………. ကတောက်ခနဲ ပဲ ဖြတ်ပလိုက်တယ်အေ…… ညည်းနှယ့်. လုပ်ရက်ထာအေ…………. :buu: :bar:
ပိုစ့်(၄)ခုလုံးကို ၀တီနေရာမှာ ခံစားပြီးတစ်ခါ ဖတ်ကြည့်တယ်၊ ပြီးတော့- နှင်းဆီ နေရာမှာ ခံစားပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်၊ လုံမလေးရေ အဲဒိတော့ စိတ်ထဲဘာဖြစ်လာလဲသိလား။
( ကျွန်တော်လည်း နောက်ပိုစ့်ကျရင် ဘာဖြစ်ခဲ့လည်းဆိုတာ မန့်ပေးမယ် )
မောဟမျဉ်းပြိုင် ပိုစ့်အမှတ် ၄ မှာ မန့်ခဲ့တာ။
၀တီ နဲ့ နှင်းဆီ အားပြိုင်မှုမှာ စာရေးသူက တစ်ခုခုအပေါ်အခြေခံပြီး ခံစားချက်ကို စိတ်နှစ်ပြီးရေးသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီပိုစ့်တွေအရ ၀တီကိုလည်း သနားပြီးကိုယ်ချင်းစာမိသလို နှင်းဆီအနေနဲ့လည်း သူ့ကြီးပြင်းကျင်လည်ရာဝန်းကျင်အရ နားလည်ပေးမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးက မဆုံးသေးတော့ ဆက်ဖတ်ရအုံး မပေါ့ဗျာ။
စာကြွင်း – ဖြေရမယ့်စာမေးပွဲက လုံမလေးအတွက် အရေးပါရင်တော့ ခဏလေးရပ်ပြီး စာမေးပွဲပြီးမှ ဆက်တင်လည်း ဖတ်လက်စသူတွေက နားလည်စွာစောင့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် သမီးရေ။
မဖြတ်လို့ မရတော့လို့ ဖြတ်လိုက်ရတာပါ။ ဘေးက ဖိုင်ကို တစ်စက်ကလေးတောင် မကြည့်ဘဲ ကွန်ပျူတာမှာ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ စာရိုက်နေတဲ့ လုံမလေးတစ်ယောက် စိတ်မလုံတော့တာနဲ့ပဲ ဖြတ်လိုက်ရတာပါ… (ဒါ လျှို့ဝှက်ချက်ပဲ…)
အဲဒီအချိန်တုန်းက ၀တီ့ဘ၀က စာနာဖို့ကောင်းပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ နှင်းဆီဘ၀ကလည်း သနားစရာပါ…အလိုလိုက်လွန်းပြီး အတ္တကြီးတဲ့မိဘရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အတွက် တော်တော်နဲ့ မရင့်ကျက်ခဲ့ပါဘူး…
နားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… နောက်အပိုင်းတွေကတော့ စာမေးပွဲပြီးမှပဲ ပြန်တင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်…သည်းခံပြီးစောင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်…
စောင်မွဲ ရှိတာလား ..
တူ စောင်မွဲရှိရင် ဖွတ်ကျား ဆက်ရေးပေးမယ်လေ..
အရွယ်လေးတွေ ရောက်လာတော့မှာ ဆိုတော့ ..
၀တီနဲ့ နှင်းဆီ ဖွတ်ကျား ကို လုတဲ့ ဇာတ် ..ရေးမယ်လေ..
အပျော် ၀င်နောက်တာပါဗျာ …
အဲလာဆိုရင်တော့ နှင်းဆီက နိုင်မှာပဲ… ပြောထားတယ်လေ..နှင်းဆီက အသားဖြူဖြူလေးနဲ့ ချစ်ချာလေးလို့….
စာစီစာကုံး ၉ မျက်နှာဆို တော်တော်များတာပဲနော်။ ငယ်ငယ်က စာစီစာကုံးရေးခိုင်းရင် စာလုံးကြီး ပြီး ခပ်ကျဲကျဲနဲ့ ဘေးမျဉ်းကိုလည်း ပုံမှန်ထက် ပိုကြီးတားပြီး လူလည်ကျဖူးတယ်။ စာမျက်နှာများအောင်လို့လေ။
၁၀ တန်းရောက်တော့ ဆရာတင်မိုးရဲ့ ပန်းလက်ဆောင်ကို ဖတ်ပြီး ရေးကျင့်ပေးတဲ့ မြန်မာစာဆရာတယောက်နဲ့ တွေ့မှ ရေးတတ်ခဲ့တာ။ ဒါတောင် ဘယ်တော့မှ ၂ မျက်နှာ မကျော်ဘူး။ ဆယ်တန်းအောင်တော့ မြန်မာစာရမှတ်က ၆၀ ပဲ ရတယ်။ ဒါက ကိုယ့်အတွက် အတော်များတယ်ပြောရမှာ ။ ကိုယ်က ၅၀ တောင် ကျော်မယ်ထင်တာမဟုတ်ဖူး။
ရေသည်ပြဇာတ်ကလည်း နှိပ်စက်တယ်လေ ။ အဲ့တုန်းက စလေဦးပုညကို ရေရေလည်လည်မုန်းတီးဖူးတယ်။
သမိုင်းကျက်တော့ နှစ်လေးဆယ်စစ်ကို နွှဲခဲ့တဲ့ ဘုရင်တွေကို မုန်းတယ်။
နောက်တက္ကသိုလ်တက်တော့ ပထမနှစ်မှာ မိုင်နာထဲက သချာင်္မှာ အင်တီဂရိတ်လုပ်တာတို့ ဟိုဘက်ဒီဘက် လှမ်းရှိတ်တာတို့ သင်ရတယ်။ အဲ့တော့လည်း မုန်းလွန်းလို့ လိမ်းဆေးတောင် ဂရိတ်ဝေါဆို မသုံးဘူးလို့ ဟစ်ဖူးတယ်။ ငါရှေ့မှာဆို လာမရှိတ်ကြနဲ့ ကောက်ထုလိုက်မှာနော် ဆိုပြီးလည်း အော်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ဒီဘ၀ရောက်သွားတာလားမသိဘူး ဟီး
ပြန်တွေးကြည့်တော့ ငယ်ဘ၀ဆိုတာ မထော်မနန်းပြောခဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အပျော်တွေ နည်းမှ မနည်းပဲ။ ခုနေတွေးကြည့်တော့ လည်း ဒါလေးတွေကိုက အမှတ်တရဖြစ်နေတော့တာ။
ဟုတ်တယ်အစ်မ..ကိုးမျက်နှာဆိုတာ ကိုးတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းများတယ်လေ…အဲဒါကြောင့် ၀တီလည်း ကြံရာမရနဲ့ ကိုးကားချက်ကဗျာတွေကို တစ်ကြောင်းချင်းရေးတော့တာပဲ…
စာစီစာကုံးကတော့ သုံးမျက်နှာကနေ ငါးမျက်နှာအတွင်းရေးရင် လုံလောက်ပါတယ်… လုံမလေးက မြန်မာစာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး သူများထက်နှစ်ဆပိုလုပ်ခဲ့တာ…ကံဆိုးစွာနဲ့ အမှတ်ထွက်လာတော့ အတူတူပဲရတယ်လေ…စိတ်နာလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့….
သင်္ချာကတော့ တော်ပါတော့ပဲ… ဂျီသြမေတြီကို လုံးဝကို စိတ်မ၀င်စားတာ… ရှိတ်တာဆိုတာလည်း စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်တာ…
ဟီး…အစ်မလို ကြွေးကြော်ရမှာ… ဂရိတ်ဝေါဆို မလိမ်းဘူးတို့…ငါ့ရှေ့မှာ လာမရှိတ်ကြနဲ့တို့….
လုံမလေးရေ..အမကတော့.အမှတ်(4) ကမှ စဖတ်ဖြစ်လို့ နောက်ကြောင်းပြန်လှန်ပြီး1-2-3 ပြန်ဖတ်နေ ရပါတယ်ကွယ်..:) နောက်ဘာဖြစ်မလဲ..ဘာဖြစ်မလဲ သိချင်စိတ် ဆက်ဖြစ်နေတာမို့..လုံမလေးရဲ့ စာမေးပွဲအပြိးကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်နော်.. လုံမလေးစာမေးပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြေနိုင်ပါစေ..
ဟုတ်ကဲ့ လင်းလင်း… ဖတ်ပေးနော်… ပြီးရင် စာမေးပွဲပြီးတဲ့အထိ ခဏစောင့်ပေး သိလား… ပေးနဲ့ဆုနဲ့ပြည့်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ရှင်…
ဟယ်တော့..ဝတီ ရဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်လေး..
ကိုခင်ခပြောသလိုပဲ – ၀တီ့ရဲ့ feeling ကိုလည်း နားလည်သလို နှင်းဆီရဲ့ ကလေး သဘာဝကိုလည်း နားလည်လို့ ရပါတယ်။
ကြီးပျင်းကြတဲ့ ဘ၀အခြေအနေတွေပေါ်မှာ အခြေခံတာပဲလေ – ဒါပေမယ့် အဲဒီ တွန်းအားတွေကြောင့် ၀တီကတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်း အားကိုးနေနိုင်မှာပါ။။
မွန်လေးရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာစာသားတွေကို နောက်တစ်ပိုင်းကြရင် ထည့်ဖော်ပြပေးပါကွယ်
ဦးကျောက် ဆိုရင်တော့ လုံမလေးလို ကဗျာရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊
ဘိုဘိုဟန် ရဲ့ သီချင်းဘဲ ရေးထည့် ပေးလိုက်မှာ
“…….. ဆရာမကိုပဲ……. သီတင်းကျွတ်ရင် ကန်တော့ တော့မည်” လို့
ကိုးမျက်နှာဆိုတော့ ဝတ္တုဆိုဒ် ဖြစ်သွားပြီလေ
အစဆုံး … တင်ပြီးမှ … တပိုင်းချင်း ပြန်ရှာဖတ်မယ် … ဟီး
ကိုရီးယားကားတောင် …. အပိုက်ဆက်တွေကို … စိတ်မရှည်လို့ … အခွေတွေ ၀ယ်ပြီး … တထိုင်ထဲ ထိုင်ကြည့်ပလိုက်တယ် … ညမအိပ် ၊ နေ့မအိပ်နဲ့ …. ခွိခွိ :harr:
အားလုံးပြီးရင် အကြောင်းကြားမယ်… ဒါဗြဲ…
ဟုတ်ပါတယ် အစ်မရေ… အဲဒါတွေက ပူလောင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လောကဓံအတွက်၊ ဘ၀အတွက် တွန်းအားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
ကပေ နဲ့ လေးကျောက်ရေ…
လုံမလေးဆိုလိုတာက ကိုးကားချက်ကဗျာတွေကိုပါ… အဲဒီအချိန်က ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာတွေက အချစ်ကဗျာတွေပဲ များပါတယ်… မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ၀တ္ထုတွေအသည်းအသန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေ…
(အဲလိုလေးတွေကို ပြောတာပါ… )
လုံမရေ နောက်ကျမှဖတ်ဖြစ်လို ဆော်တီးပါ … ကျန်တဲ့အပိုင်းများကိုလည်း ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်စာမေးပွဲအတွက်အရင်လုပ်လိုက်ပါအုံး … အော်.. အလုပ်ချိန်ကြီးပို့စ်ထိုင်ရေးနေလို့လည်း အလုပ်ပြုတ်နေအုန်းမယ်နော် … မှန်းကြည့်တာ …. ဟီး…
သာမီး အခု စာအရမ်းကြိုးစားနေပါဒယ်… အလုပ်ထဲမှာလည်း မင်သေသေနဲ့ ပို့စ်မရေးတော့ဘဲ.. ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပါဒယ်ချင့်…
ချွင်းချက်..ကွန်မန့်လေးတော့ တစ်ခုစ နှစ်ခုစ ရေးပါဒယ်ချင့်….
အေး လုံမရေ.. အလုပ်ထဲမှာလည်း မှင်သေသေနဲ့ ပို့စ်တင် ကွန့်မတ်ရေးတာကိုတော့ မျက်မြင်ကိုယ့်တွေ့ပေါ့နော်… နင့်မျက်နှာကြီး ပြုံးနေပြီဆို သဘောပေါက်တယ်
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိချင်ပေမယ့်.. စာမေးပွဲလေးကိုတော့ ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်… စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ ဆက်ဆက်ရေးတင်ပါလို့ တော်ကြာ မုဒ်အောက် သွားမှာ ဆိုးလို့ ဟဲ ဟဲ
နာ့ဘ၀လေးကို တနားပါဟယ်…. တစ်ခါတစ်လေဆို မပြုံးတောင်မပြုံးနိုင်ဘဲ အောင့်ထားရတာ… မျက်လုံးကို ပြူးထွက်လို့…
သြော် ဒါကြောင့် နင် တခါတခါ မျက်လုံးကြီးပြူးပြီ အခန်းထဲက ထွက်ထွက်ပြေးသွားတာ ဒါကြောင့်ပေးကိုး… တနားထာ့ဟယ်… .
ငယ်ဘ၀ကတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ ဘ၀ဆိုတာကိုစဘို့အရှိန်ယူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လည်း။ နောက်အသက်အရွယ်တွေရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ တချိန်ကအကြောင်းတွေကို ပြန်လည်ခံစားလာနိုင်မှာပါ ကိုယ်လည်းတချိန်က မြန်မာစာကို ဖတ်စာအုပ်ထဲကအတိုင်း သည်၊၏ မလွဲ တစ်လုံးမကျန်ဖြေခဲ့ပေမည့် စာစီစာကုန်းကို ကွန့်ပြီး ၁၀ မျက်နှာလောက်ဖြေခဲ့တာ မော်ဒရေးရှင်းအမှတ်ဘဲ ရခဲ့လို့ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေဂုဏ်ထူးအားလုံးပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ် ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရပေါ့ အခုတော့ အဲဒီကိစ္စဟာ ကိုယ့်အတွက် ရယ်စရာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုတ်အဖြစ် အားလံးကိုချပြနိုင်ခဲ့ပြီလေ။ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွင်နိူင်ပါစေ